Booliska Kenya Oo Xaafadda Islii Ku Toogtay Labo Nin Oo Watay Bastoolad Iyo Bambaano * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi, Mareeg.com: Booliska Kenya ayaa manta Xaafada Islii ee Soomaalidu ku badan tahay ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku dilay labo nin oo boolisku sheegay iney wateen bastoolad iyo bambaano gacanta laga tuuro.
Howlgal saaka ay qaadeen booliska Nairobi ayay ku dileen labada nin, waxaana dilku ka dhacay Wadada 12-ka ee xaafada Islii, iyadoo laga helay Bastoolad iyo bambo gacmeed sida boolisku yiri.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in loo maleynayo in labadaan nin ka dambeyeen weerarkii bam ee bishii December ee sanadkii 2012 lagu dhaawacay Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ahaa Xildhibaanka degmada Kamukunji ee Xaafada islii ka tirsan tahay.
Taliyaha Booliska Nairobi, Benson Kibue ayaa u sheegay warbaahinta Kenya in raga la dilay ay qorsheynayeen inay qaadaan weeraro, hase ahaatee ciidamada ammaanka ay in muddo ah ku daba jireen.
Benson Kibue ayaa sheegay in ragan la dilay loo maleynayo iney yihiin gangs weeraro badan oo bambaanooyin ah ka geystay Nairobi oo uu ki jiro weerarkii lagu qaaday Xildhibaan Yuusuf Xasan.
Meydadka labada nin ayaa in muddo ah waxay yaaleen wadada laamiga ee 12th Street dhinaceeda, oo ku dhow ku dhow Kenya Bus Service (KBS) ee xaafaadda Eastleigh ee magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya.
Maareeyaha degmada Kamakunji Maxamed C/kariim Ismaaciil (Shiine) islamarkaana goob joog ka ahaa marka la tooganayay nimanka ayaa sheegay in boolisku ay ku wargaliyeen in raggani muddo dheer dabagal ku socday ayna qaadeen weeraro isdaba-joog ah oo loo adeegsaday bambaanooyin.
Maxamed C/kariim Ismaaciil (Shiine) ayaa sheegay iney tahay markii ugu horreysay ee boolisku ay tallaabo qaadeen tan iyo markii xildhibaan Yusuf Xasan la weeraray dabayaaqadii sanadkii hore.
Shiino ayaa sheegay in ragga la toogtay aysan Soomaali ahayn oo ay ahaayeen Keenyaanka kale taasoo muujinaysa inaysan Soomaalidu wax lug ah ku lahayn weeraradii isdaba-joogga ahaa ee ka dhici jiray xaafada Islii ee Soomaalidu ay ku badantahay.
Xildhibaanka la sheegay in raga manta la dilay ay dhaawaceen ee Yuusuf Xasan ayaa hada ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka, halkaasoo lagaga soo saarayo biro lugaha uga jira.
Qaraxyada iyo weerarada ka dhaca xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa inta badan farta lagu fiiqi jiray Soomaalida, hase ahaatee nimanka maanta boolisku dilay oo aan aheyn Soomaali ayaa laga yaabaa in dowladda Kenya ka tusaale qaadato.